बेथोभन: कान नसुन्ने हुँदा पनि कसरी सबैभन्दा प्रख्यात सङ्गीत रचना गरे - Lekhapadhi मुख्य समाचार : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
बेथोभन: कान नसुन्ने हुँदा पनि कसरी सबैभन्दा प्रख्यात सङ्गीत रचना गरे
लेखक : लेखापढी ३ पुष २०७७, शुक्रबार १५:०० मा प्रकाशित
सन् १८२४ मे ७, भियना। शाही परिवार, कुलीन समुदाय र सहरका धनाढ्यहरू एउटा अभूतपूर्व साङ्गितिक कार्यक्रमका लागि भियनाको ‘इम्पिरिअल एन्ड रोयल कोर्ट थिएटर’मा भेला भएका थिए।
त्यो अभूतपूर्व कार्यक्रम भनेको बेथोभनको ‘नाइन्थ सिम्फोनी’को पहिलो प्रस्तुति थियो। श्रोता तथा दर्शकका अपेक्षा धेरै थिए।
सम्झनलायक त्यो एक साँझ
कान नसुन्ने भए पनि बेथोभनले अहिलेसम्मकै महान् केही सङ्गीतहरू रचेका छन्
यो घटनाका विभिन्न स्मरणीय क्षणहरू रहेको लोरा टनब्रिजले बीबीसीलाई बताइन्। अक्सफर्ड विश्वविद्यालयमा सङ्गीतकी प्राध्यापक रहेकी उनले हालै “बेथोभन: अ लाइफ इन नाइन पिसेज” जीवनकथा लेखेकी छन्।
“पहिलो प्रदर्शनका लागि उनी मञ्चमा थिए र उनकै छेउमा सङ्गीत निर्देशक पनि थिए जसले सबै कुरालाई मिलाएर राखेका थिए। त्यतिबेलासम्म बेथोभन भरपर्दा कन्डक्टर रहेनन् भनेर सबैलाई थाहा भइसकेको थियो,” प्राध्यापक टनब्रिजले भनिन्।
“सङ्गीतको एउटा चालकै बेला दर्शकहरूले प्रशंसा स्वरूप भव्य रूपमा ताली बजाएका थिए किनभने उनीहरू त्यो पुनः सुन्न चाहन्थे,” उनले थपिन्।
मनोरञ्जन बिर्स: ‘सङ्गीत भनेको कला हो’
“थोरै तयारी भए पनि त्यो भव्य हुनु गज्जब थियो,” प्राध्यापक टनब्रिजले भनिन्।
लोरा टनब्रिजले बेथोभनको २५० औं जन्मोत्सवका अवसरमा “बेथोभन: अ लाइफ इन नाइन पिसेस” नामक जीवनकथा लेखेकी छन्
उनी कामप्रति लगाब भएका अत्यन्तै कल्पनाशील सङ्गीतकार बने – उनको व्यक्तित्व जटिल र परस्परविरोधी भनेर चिनिन्थ्यो।
उनी जर्मनीमा जन्मिएका भए पनि उनलाई भियनाका महान्‌तम सङ्गीतकार भनेर चिनिन्छ। “सङ्गीतको क्षेत्रमा उनले धेरै तरिकाले क्रान्ति ल्याइदिएका छन्,” टनब्रिज भन्छिन्।
“सङ्गीतले विचार र भावनाहरू व्यक्त गर्न सक्छ भन्ने गरेका उनले शुद्ध मनोरञ्जनभन्दा धेरै माथि सङ्गीत हुन्छ भनेर प्रदर्शनहरू गरे। त्यसको अर्थ सङ्गीतमा केवल मनोरञ्जनभन्दा धेरै गहिराइ हुन्छ भन्ने उनको बुझाइ थियो।”
“सङ्गीतलाई कलाको रूपमा उठाउन बेथोभनको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ,” प्राध्यापक टनब्रिजले भनिन्।
सँगै उनी ‘रिसाहा, स्वार्थी, असामाजिक, आत्मरतिमा रमाउने, उदास, फोहोरी, कन्जुस र जँड्याहा’ भनेर पनि चिनिन्थे।
बेथोभन जीवनमा धेरै समय अस्वस्थ रहे
बेथोभन जटिल व्यक्तिका रुपमा चिनिए – उनी स्वास्थ्य समस्याका कारण धेरै पीडामा रहे र केही उपचार त उल्टै उनका लागि हानीकारक पनि बन्यो।
आधुनिक विज्ञहरूले उनको स्वास्थ्य समस्या के थियो र कान नसुन्ने कसरी भए, त्यसले कसरी उनको व्यक्तित्व र सङ्गीत रचनालाई प्रभावित गर्‍यो भनेर ‘ऐतिहासिक फरेन्सिक’ अनुसन्धान गरेका छन्।
बीबीसी विश्व सेवाले बनाएको बृत्तचित्र “डाइसेक्टिङ बेथोभन” मा ब्रिनेटका न्यूरोसर्जन हेनरी मार्सले उनको शरीरमा के-के समस्या थिए भन्ने सूची तयार गरेका छन्।
चिकित्सकका अनुसार बेथोभनलाई “पेट, पाचन प्रक्रिया र पखालाको समस्या थियो। त्यसबाहेक उनी चरम वितृष्णामा थिए र उनमा विषाद पनि थियो।
निधनपछि उनको शरीरमा के समस्या थियो भनेर शवको परीक्षण गरिएको थियो
अत्यधिक मदिराको सेवन उनको परिवारको एउटा समस्या नै थियो: उनकी हजुरआमा पनि यसबाट ग्रस्त थिइन् र उनका बुवा नामुद पियक्कड थिए।
आफूले सुन्न नसकेको बारे बोल्दै उनले भनेका थिए: “अँ! म कसरी स्वीकारौं कि जुन इन्द्रिय मसँग उच्च तहमा हुनुपर्थ्यो त्यो नै मेरो कमजोरी बनेको छ भनेर?”
“त्यसबाहेक, बेथोभनले आफूलाई ज्वरो आउने र टाउको दुख्ने गरेको गुनासो पनि बाचुञ्जेल गरेका थिए।”
यो घरमा बेथोभनले शरण लिएका थिए र आफ्ना भाइहरूलाई स्वीकारोक्तिको पत्र लेखेका थिए
“…झण्डै ६ वर्षअघि मलाई एउटा घातक बिमारी देखिएको थियो र असक्षम चिकित्सकहरूले त्यसलाई थप बिगारिदिए,” उनले लेखेका थिए।
“म समाजभन्दा टाढा बस्नुपर्छ। यदि मैले मानिसहरूलाई भेटेँ भने मेरो अवस्थाबारे मानिसहरूले थाहा पाउनेछन् र मेरो रिसाहा स्वभाव थप खराब हुनेछ।”
एउटा असाध्यै मार्मिक हरफमा उनले लेखेका छन्: “अँ! म कसरी स्वीकार गरौं कि जुन इन्द्रिय मसँग पूर्णतामा हुनुपर्थ्यो, त्यो तहको पूर्णता जुन थोरै सङ्गीतकर्मीले मात्रै बुझेका छन्, त्यो नै मेरो कमजोरी हो भनेर?”
अल्जाइमर्स हुँदा पनि नाच्न नबिर्सेकी यी वृद्धा को हुन्
“के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने सङ्गीतकारहरू आफ्नो कल्पनामा धेरै भर पर्छन् र उनीहरूले दिमागमा स्वर सुन्न सक्छन्। बेथोभन बाल्यकालदेखि नै सङ्गीत रच्थे,” प्राध्यापक टनब्रिजले व्याख्या गरिन्।
“उनी सायद बाहिरी दुनियाँ सुन्न सक्दैन थिए तर आफ्नो दिमागमा भने सङ्गीत सुन्नसक्थे।”
“ओड टु जोइ” ले बेथोभनको राजनीतिक र सामाजिक आदर्श समाहित गर्छ
उनी असामाजिक र बिरामी थिए भन्नका लागि थुप्रै प्रमाणहरू छन्। प्राध्यापक टनब्रिज भन्छिन्, “तर बेथोभन त्यो भन्दा धेरै थिए।”
“उनको व्यक्तित्वको अर्को पाटो पनि छ। उनी मित्रवत र विनोदी पनि थिए। उनको मानवीय गुण देखाउने अन्य घटना पनि छन्।”
एउटा व्यक्तिगत र कठिन क्षणमा उनले रचेको “ओड टु जोइ” ले उनी भविष्यप्रति आशावादी रहेको भन्ने देखाउँछ।
सानैदेखि बेथोभन फ्रेडरिक शिलरका कविता सङ्गीतमा लयबद्ध गर्न चाहन्थे र अन्ततः उनले आफ्नो ‘नाइन्थ सिम्फोनी’मा त्यो गरे।
“उनले जीवनको अन्तिम समयसम्म पनि त्यो आशा राखे र यो कुरा हामीले बेवास्ता गर्न सक्दैनौं।”
बेथोभनको ५६ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो र उनको अन्तिम बिदाइका लागि भियनाका हजारौं मानिसहरू भेला भएका थिए
(बिबिसी नेपालीबाट साभार)
मुख्य समाचार, लेखापढी विशेष
अध्ययन बिना सडक निर्माण; घटदो कृषिभूमि, दुुर्घटना र भुृ-क्षयमा वृद्धि